“Cunto buu ku sumoobay dabadeedna wuu SUUXAY.”. Man United oo ka hadashay xaaladda daafaceeda Chris Smalling ee Isbitalka la dhigay – Gool FM
“Cunto buu ku sumoobay dabadeedna wuu SUUXAY.”. Man United oo ka hadashay xaaladda daafaceeda Chris Smalling ee Isbitalka la dhigay
Byare July 4, 2016
(Manchester) 04 Luulyo 2016. Goor dhow ayay ahayd markii ay saxaafaddu shaacisay sawirro daafaca Man United ee Smalling oo la dhigay isbital ku yaala dalka Indonesia.
Marbaa la yiri wuxuu ku dhaawacmay ciyaar badeed uu baranayay, marna waxaa la sheegay inuu wax yeeleeyay xawaaan badeedka loo yaqaano jellyfish.
Laakiin Man United ayaa iminka hadashay oona sheegtay inuu cunno ku sumoomay laacibkooda intii uu fasaxa ku joogay dhul xeebeedka Bali.
“Man United waxay caddeyn kartaa in Chris Smalling uu ku sumoobay cunno intii uu ku guda jiray waqtigiisa fasaxa taa oo ka dhalatay inuu suuxo.”. Warbixin rasmi ay soo saartay Man United ayaa sidaa lagu yiri.
“26-jirka daafaca ayaa loo qaaday Isbital iminkana waa uu fiican yahay.
“Smalling wuxuu iminka ku jiraa fasax, kaddib waqtigiisii England ee Euro 2016, ka hor inta aan lagu wargelin inuu dib ugu soo laabto tababarka la isugu diyaarinayo kal ciyaareedka cusub daba yaaqada bishan.
“Chris wuxuu jeclaan lahaa inuu qof kasta uga mahad noqo wanaagii ay u rajeeyeen.”.
DHEGEYSO EURO 2016: Warbixin xul ah oo ku saabsan afarta dal ee usoo baxay nus-dhamaadka Euro 2016 (Tebintii Xaaji)
Antonio Conte oo bartilmaameed ka dhiganaya Graziano Pelle